Inona no atao hoe Plastic tsindrona koronosy? Plastic tsindrona koronosy dia teknika ampiasaina hamolavola plastika ao amin'ny endriky ny zavatra ianao mikendry ny famokarana. Nandritra ny fampidirana dingana koronosy, thermoplastic polymers no nampidirany an-bobongolo lavaka. Mba hanaovana izany, bala ny zavatra toy izany dia tezitra ny ...Lire la suite »
Inona no The Cnc Machining barahina Parts? Barahina machining manan-danja maro faritra manana tombony raha oharina amin'ny machining fitaovana hafa. Varahina nitodika faritra sy ny singa dia maharitra, vola-mahomby, ary na dia mamorona tombo-kase ho an'ny Fittings matahotra ianao. Ankoatra izany, varahina sy nitodika machining faritra manana avo ...Lire la suite »
Mandroso Stampings Progressive nohitsakitsahiko dia metalworking fomba izay mety hanodidina punching, coining, hiondrika sy ny maro hafa ny manova fomba ara-nofo mangenahena metaly, miaraka amin'ny rafitra sakafo mandeha ho azy. Ny rafitra sakafo manosika ny lavalava ny vy (araka ny unrolls avy amin'ny coil) manerana azy rehetra ...Lire la suite »
Nahoana ary aiza ny fampiasana tsindrona plastika Lasitra A plastika tsindrona lasitra dia misy fitaovana natao tao amin'ny manontolo na ny ampahany amin'ny fitaovana plastika (manavaka ny indostria thermosetting laminates), sy izay manampy betsaka ny plastika ny ilàna ny fitaovana. Toy izany fitaovana ny lalana rehetra miainga avy amin'ny thos ...Lire la suite »